Mareykanka: Weerar Khasaare geystay oo lagu qaaday guri uu leeyahay Wadaad Yuhuud ah | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Mareykanka: Weerar Khasaare geystay oo lagu qaaday guri uu leeyahay Wadaad Yuhuud...
Mareykanka: Weerar Khasaare geystay oo lagu qaaday guri uu leeyahay Wadaad Yuhuud ah
New York (Halqaran.com) – Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay weerar toorrey loo adeegsaday oo ka dhacay gobolka New York ee dalka Mareykanka. Weerarka ayaa ka dhacay guri uu leeyahay wadaad Yuhuud ah, waxaana halkaasi ka dhacaysay markii la weerarayay munaasabad xus ahayd. Ninkii weerarkaasi geystay ayaa sida la sheegay la soo qabtay.
Weerarku waxaa uu ka dhacay guri ku yaala deegaanka Monsey, ee ku yaala waqooyiga magaalada New York sida ay sheegeen Golaha Bulshada Yahuudda ah xilli ay socotay xaflad diini ah.
Ninka weerarka qaaday ayaa baxsaday balse markii dambe waa la qabtay sida ay sheegeen Boolisku .Ujeedda weerarkaan laga leeyahayna ilaa haatan ma cadda.
Qof ka mid ah dadka dhaawacu soo gaaray ayaa lix jeer la galiyay tooraydda sida ay sheegeen Golaha Bulshada Yahuudda.
Weerarkan ayaa imaanaya maalin kadib markii Booliska magaalada New York ay qaadeen talaabooyin amniga kor loogu qaadayo gaar ahaanna xaafadaha ay degganyihiin dadka Yahuuda ah, waxaana arrintaan ay ka dambeeysay kadib markii ay soo baxeen hanjabaado Yahuud naceyb ah oo loojeedinaya bulshadaasi.
Ninka weerarka gaystay ayaa isaga oo oradaya galay guriga ay ka socotay xafladda diiniga ah,waana dhisme ay ku noolyihiin Yahuud badan amba ay ku qabsadaan xafladaha diiniga ah.
Yossi Gestetner, oo ka mid ah mas’uuliyiinta Yahuudda ayaa sheegay in xilliga uu weerarku dhacayay ay dad badan ku jireen gudaha dhismaha.
Duqa magaalada New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in weerarku uu ahaa mid aan la qbali karin waxaana uu ku tilmaammay ficil fulaynimo ah.
guriga wadaad Yuhuudi ah
magaalada New York
Weerar toorey oo khasaare geystay